Office – SoShwe
အထိုင်များတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ။
7 days ago	Health & Beauty 0
တချို့သောသူတွေက ရုံးအလုပ်ဟာ အန္တရာယ်အနည်းဆုံး ဒါမှမဟုတ် ခက်ခဲမှုအနည်းဆုံး အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဆရာဝန်တွေက ဒါဟာဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးသူတေသီအချို့က ရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတချို့ကို လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Gluteus medius tendinopathy ဆိုတာကတော့ dead butt syndrome လို့လူသိများတဲ့ အချိန်အကြာကြီး အထိုင်များသူတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထိုင်များတဲ့သူတွေရဲ့ gluteus ကြွက်သားတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို မေ့လျော့သွားကြပြီး အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို အလုပ်တာဝန်တွေ ဖြန့််ဝေပေးကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ကြွက်သားရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ လျော့နည်းလာပြီး ခါး၊ ဒူးနဲ့ တင်ပါးဆုံတွင်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ စတင်လာပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ချို့ယွင်းသွားပါက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ခံစားရစေနိုင်တဲ့ …
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒေါသထွက်စရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုပြုမူမလဲ ? ? ?
April 18, 2022	LifeStyle 0
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့နေရာက လူအမျိုးမျိုး ၊ စိတ်အထွေထွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ခံစားချက်အနေနဲ့လည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ စိတ်တိုစရာကိစ္စတွေနဲ့ ကြုံလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဖြေဖျောက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေနော်။ ၁။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာ စိတ်ငြိမ်စေနိုင်တဲ့အပြင် အခြားသောစိတ်ငြိမ်စေနိုင်မယ့် ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ပါ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ယုံကြည်ရသူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောပါ။ ဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို သင်ယုံကြည်ရသူတစ်ဦးကို ရင်ဖွင့်ပါ။ သူတို့က သင်မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ ရှုထောင့်မှ အကြံဉာဏ်များ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင့်ခံစားချက်များကို ဖြေလျှော့စေနိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့လူတော့ ဖြစ်ပါစေ။ ၃။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ယူပါ။ …
အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်သူများအတွက် ကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်း (၈) မျိုး။
April 15, 2022	Health & Beauty 0
နေ့စဉ် နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ တစ်နေ့ကုန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသူများအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားရန်အတွက် အလွန်အမင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရသည့်တိုင်အောင် ကျန်းမာရေးနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈)ခုကို Soshwe က စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နံနက်စာကို ကောင်းမွန်စွာစားသောက်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်သည့် နံနက်စာကို စားသုံးခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာရဲ့အစမှာတင် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ရရှိစေနိုင်မှာပါ။ ၂။ အလုပ်စားပွဲကို သပ်ရပ်စွာထားပါ။ မိမိရဲ့ အလုပ်စားပွဲပေါ်၌ မီးအိမ်သေးသေးလေးတစ်လုုံးနဲ့ အပျော်ခရီးသွားခဲ့စဉ်က ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ၊ သုံးပုံ တင်ထားခြင်း၊ ပန်းအိုးအသေးစားလေးနဲ့ အပင်စိုက်ပျိုးထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအရ အဆိုပါအပြုအမူတွေက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း …